Faritra Diana sy Sofia : Nijery akaiky ireo traboina ny Filoham-pirenena -
AccueilRaharaham-pirenenaFaritra Diana sy Sofia : Nijery akaiky ireo traboina ny Filoham-pirenena
“Eo anilan’ny vahoaka mandrakariva”. Izay rahateo ny fanambaran’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina. Araka izany, tsy nitsahatra nitety faritra maro manerana ny Nosy ny Filohan’ny Repoblika taorian’ny fandalovan’ilay rivodoza Enawo. Taorian’ny fandalovany tany Antalaha, Maroantsetra ary Ambohitsilaozana (Ambatondrazaka), nihazo ary nijery manokana ireo traboina tamin’iny Faritra Diana sy Sofia iny indray ny tenany, omaly.
Araka izany, tanàna telo no indray notsidihan’ny Filoham-pirenena ka nanombohany izany ny tao Antsohihy avy eo tao Bealanana ary ny tao Ambanja.
Tamin’izany fandalovany tamin’ireo tanàna telo izany indrindra no nankaherezany ireo traboina sy ny fianakavian’ireo namoy ny ainy sy ireo tsy hita popoka nandritra ny loza. Nambarany tao Antsohihy fa “mihaino mandrakariva ny mponina ny tenany”. Notsindriany ihany koa fa mandray an-tanana tanteraka amin’ny fanomezana fanampiana ny Fitondram-panjakana. Tsy vitan’izay fa nilaza ihany koa izy amin’ny fanamboarana sy fanarenana haingana ireo fotodrafitrasa maika.
Toraka izany ihany koa ny fanambarany tao Bealanana. Saingy, notsindriany mafy ny fanamboarana ny Lalam-pirenena faha-31 (RN 31), izay mampitohy an’i Bealanana amin’ Antsohihy. Ho fanamorana ny fivezivezen’ny vokatra amin’ireo tanàna roa ireo sy ny fifandraisana no anton’ny fanamboarana. Ankoatra izay, hahazo fanamboarana ihany koa ny lalana mirefy 5 km ao amin’ny kaominina Bealanana. Tsy vitan’izay fa eo ihany koa ny fanomezana rano fisotro madio ho an’ny mponina.
Namarana ny fitsidihany ireo faritra tao Ambanja kosa ny Filoha Hery Rajaonarimampianina, omaly, tao amin’ny kaominina ambanivohitra, Ambohimena, lalana mihazo an’Ankify. “Fantatro ny olanareo, ary izany indrindra no mahatonga ahy sy ny mpikamban’ny governemanta vitsivitsy ho eto aminareo, hankahery sy hampitraka anareo taorian’ny fandalovan’iny rivodoza iny”, hoy ny Filohan’ny Repoblika. Nambarany hatrany fa hovahana avokoa ny olana rehetra amin’ny Faritra, toa ny herinaratra, rano fisotro madio ary ny lalana, sns.
Nandritra ny fitsidihana tany amin’ny Faritra Diana sy Sofia iny, nanolotra vary miisa 200 lasaka sy voamaina 100 miisa 100 lasaka ary tafo-trano ho an’ireo traboina ny Filoha Hery Rajaonarimampianina. Mbola an-dalana kosa ireo fanampiana hafa, hoy ny nambarany.